MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: June 2013
တရုတ် ကျူးကျော်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘွားများ တွန်းလှန် တိုက်ဖျက်ခဲ့ခြင်း - အပိုင်း (၇)
အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ တင်ပြချက် (၃)။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစက တရုတ်ဖြူ တပ်ဖွဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့လို့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်က ကွန်မြူနစ်များကပင် ယာယီအပစ်ရပ်ပြီး တိုင်းရင်းသား အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် တွန်းလှန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ တဖန် ကွန်မြူနစ် တရုတ်နီအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးများ၏ အလယ်တွင် ကျွန်းများ ပြုလုပ်၍ သစ်ပင်များ စိုက်ပေးမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာကရုဏာ စေတနာကို သိမြင်ခဲ့ရပါသည်။ အမှန်စင်စစ် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လေယာဉ် ဆင်းသက်၍ မရအောင် တရုတ်တို့က ကြံစည်ခဲ့ဟန် တူသည်ဟု ရှေ့လူကြီးသူမများက ပြောဆို ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဘိန်းစိုက်ပျိုးသည့် အလေ့အထများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကူးစက် ခဲ့ရသဖြင့် ယခုအခါ ဘိန်းထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် နံမည်ပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာ တင်ပြချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် မူးယစ်ဆေး (ရာဘ) ထုတ်လုပ်မှု အများဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ တရုတ်လူမျိုးများကြောင့် တချို့ ရှမ်းယောင်္ကျားများမှာ ဘိန်းရှူသည့် အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာပြီး ရှမ်းအမျိုးသမီးများက ရှာဖွေကျွေးမွေးရသည့်ဘဝမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ဒုက္ခတောထဲကို သက်ဆင်းခဲ့ရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 5:31 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:04 PM No comments:
သမ္မတနေရာ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် တားမြစ်ထားသည်ဆိုသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို မပြင်ဆင်ပါက၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် သြစတြေးလျ အစိုးရအနေနှင့် အကူအညီ ပေးအပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း သြစတြေးလျ-မြန်မာ ပါလီမန် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Janelle Saffin က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:41 PM No comments:
(7 Day News)
ငွေစက္ကူအတုများ ပြည်တွင်း၌ ပျံ့နှံ့လာမှုကို တားဆီးရန်နိုင်ငံတော် အစိုးရနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေး တစ်ရပ် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စီးပွားရေး ပညာရှင်များက ပြောကြားသည်။
ငွေစက္ကူ အတုများ ပြည်တွင်း၌ ပျံ့နှံ့မှုများလာပါက ကျပ်ငွေအပေါ် လူထု၏ ယုံကြည်မှုလျော့နည်း သွားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့လာနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လူမှုစီးပွားအကြံပေးကောင်စီဝင် စီမံခန့်ခွဲရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:40 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှား တိုက်လေယာဉ်များ လေ့လာ
ရုရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ မစ်လို့ လူသိများတဲ့ MiG တိုက် လေယာဉ်တွေ ထုတ်လုပ်ရာ စက်ရုံကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါ တယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ တပ်မတော်(လေ) စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် လွင်ဦး ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြှင့် ထားတဲ့ MiG 29 M လေယာဉ်ကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ရေးသားထားပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေမှာ တိုးတက်မှု ရှိလာသော်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိသေးသောကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်တပ်မှ ကလေးစစ်သား အဖြစ် စုဆောင်းခြင်း၊ အသက်ပြည့်သူများကိုလည်း အတင်း အဓမ္မ စစ်တပ်ထဲသို့ ခေါ်သွင်းခြင်း၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခြင်း၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်များက အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် လူကုန်ကူးခံရခြင်း စသည့် ပြဿနာများစွာ ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - အပိုင်း (၁၁)
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုရာမှာ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စစ်တပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုပြီး အခန်းကဏ္ဍ နှစ်ရပ်ရှိနေရာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေပြီး စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အနေနဲ့ လေ့လာ သုံးသပ်နိုင်ရန် ဆက်လက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အင်ဒိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ဆက်လက် ဆွေးနွေးရာမှာ နောက်တစ်ချက်က ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တရားရုံးတွေကို ပိုမိုအားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ရမယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ရန်လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတတယ်လို့ အစိုးရက ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ တပ်မတော်သားတွေ USDP ကို အတင်းအကြပ် ဝင်ခိုင်းလိုဝင်ခိုင်း၊ USDP ကို မဲမထည့် မနေရအမိန့် မထုတ်ရုံတမယ် ဖိအားပေး စီမံတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘဲ တပ်က ဘယ်ပါတီကိုမှ ထောက်ခံ အားပေးတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ရှောင်ရှားသင့်တယ်။ အင်ဒိုမှာ စစ်တပ်ဟာ ယခုဆိုရင် ဘယ်ပါတီရဲ့ သြဇာလောင်းရိပ်မှ မရှိဘဲ လွတ်ကင်းနေပြီ ဖြစ်တယ်။ အခြေခံ ဥပဒေအရ ၅ (ည) နှင့် ၁၇ (၁) လိုမျိုး လိုသလို ဆွဲစိလို့ရတဲ့ ဥပဒေမျိုးကို ပြင်သင့်တယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်း Vol 182, No. 1 တွင် ဦးဝီရသူအား မျက်နှာဖုံးတင်၍ “THE FACE OF BUDDHIST TERROR” ဆောင်းပါးအား ဖော်ပြခဲ့သည်ကို သမ္မတရုံးက ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို မည်သည့်အတွက် ထုတ်ပြန်ရသည်၊ ကြေညာချက်သည် ဦးဝီရသူနှင့် ၉၆၉ အဖွဲ့ကို ထောက်ခံအသိမှတ် ပြု မပြု၊ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ပိတ်ပင်ရန် ရှိ မရှိတို့ကို သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒု-ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကို ဧရာဝတီမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
မဟာစည်သူ စစ်ကြောင်း - ပင်မတပ်
တပ်ပေါင်း ၃၀ - ကို ဦးစီး၍ ၀န်ကြီးမဟာစည်သူသည် အင်းဝမှ ၁၁၂၉ - ခု ပြာသိုလဆန်း ၅ - ရက်နေ့ ထွက်သည်။ မတ္တရာအနီး ကင်းရွာ၊ ထိုမှ သရက်ပင်ကိုင်း၊ သဖန်းကိုင်း၊ အုန်းလွတ်၊ ကျောက်မဲရွာများကိုဖြတ်၍ သုံးဆယ်သို့ ချီမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ သုံးဆယ်မှ ဂုတ်တွင်းကိုဖြတ်၍ ရန်သူတပ်များနှင့် တွေ့ထိရန် သီပေါဘက်သို့ ချီတက်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:35 PM No comments:
ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကို ပြုပြင် ဖွဲ့စည်းခြင်း - အပိုင်း (၂)
အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပြီး နှစ်လ အကြာမှာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ဌာနစိတ် (၂) (နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး ဌာန StB) ကို ပြည်ထောင်စု ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမိန့်နဲ့ ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ အဲဒီကာလက စလို့ ဌာနစိတ် (၂) အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ပြည်သူ့ကော်မတီနဲ့ ရွေးချယ် စီစစ်ရေး ကော်မတီလို့ ခေါ်တဲ့ ကော်မတီတွေရဲ့ စီစစ်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ချက်ချင်း ဖြစ်လာကြတယ်။ ပြည်သူ့ ကော်မတီများကို ပြည်သူ့ဟစ်တိုင်နဲ့ တခြား ပါတီများရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ဒါတွေက တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း စစ်စစ် ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူ့ ကော်မတီရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ရွေးထုတ် စီစစ်ရေး ကော်မတီမှာ ထောက်လှမ်းရေး တဖြစ်လဲတို့က တက်ကြွတဲ့အခန်းက ပါဝင်ကြတယ်။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ယခုအခါ နိုင်ငံ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ် ယခင်ကထက်ပိုပြီး အာရုံစိုက်မှု ရှိလာနေကြသည်ကို တွေ့မြင်လာရသည်။ အခြေခံ ဥပဒေအတည်ပြုခါစ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ဝန်း ကျင်တွင် အဓိကပါတီကြီးတစ်ပါတီက ယင်းအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကာ အခြားသော နိုင်ငံရေးအင်အားစု အများအပြားကလည်း အခြေခံဥပဒေကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ယခင်က လုံးဝငြင်းပယ် လျစ်လျူရှုထားသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများက ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေကို ရှေ့ဆက်ရမည့် လမ်းခရီးတွင် စီးနင်းစရာယာဉ်အဖြစ် သဘောထားကာ ယင်းဘောင်ထဲမှ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆီ ဆက်လက်တက်လှမ်းဖို့ စဉ်းစားလာကြသည်။ ထို့ပြင် ယမန်နှစ်က ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များသည်ပင်လျှင် ၎င်းတို့ ဥပဒေ ကိုပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရန်လိုသည်ဆိုသည့်အချက်ကို လက်ခံကာ ဆွေးနွေးကြရန် သဘောတူခဲ့သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:48 PM No comments:
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုနှင့်အပြီး ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ အခြေအနေတချို့ကိုတော့ သုံးသပ်စောင့်ကြည့်နေသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဝင်းမင်း ဦးအောင်သူငြိမ်းတို့နှင့် ဦးကျော်ဇံသာက ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးဝင်းမင်းတို့ ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခဏ ပြန်သွားတော့ ပြန်လိုက်တိုင်း အရင်ကထက် ဒီနေရာဖြင့် တိုးတက်နေပါလား ဆိုတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါလား။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:59 AM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:06 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:47 PM No comments:
နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင်သွား မြန်မာ့ စစ်သည်တော်များ
အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ တင်ပြချက် (၂)။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ပမာ ချစ်ခင်နေပါသည်ဟု မည်သို့ပင် ပြောနေစေကာမူ UWSA အား ကြားခံနယ်မြေအဖြစ် ထူထောင် အားပေးနေသည်ဆိုသော သံသယဖြစ်ဖွယ် စွပ်စွဲချက်များ ပေါ်ထွက်လျက် ရှိနေရာ အမိနိုင်ငံ ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း တော်လှန်ရေးသတိနှင့် ပြုမူနေထိုင်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တရုတ်စစ်တပ်မှ အငြိမ်းစား ယူသွားသည် ဆိုသော အရာရှိကြီးများက လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဂျိမ်းစာစောင်၏ ဖော်ပြချက်အရ သံချပ်ကာများနဲ့ ရုရှားလုပ် MI – 17 ရဟတ်ယာဉ်များကို တဖက်လှည့်နှင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းရာဇဝင် အဆက်ဆက် တရုတ်တို့ ကျူးကျော်မှု၊ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှု ရှိခဲ့သည်။ ဗျူစောထီးမင်း လက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ နရသီဟပတေ့ လက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ မင်းခေါင်ကြီး လက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ထူပါရုံ နရပတိ လက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ပင်းတလဲနှင့် ပြည်မင်း လက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ တရုတ်တို့ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက် တိုက်ခိုက်ကြသော်လည်း ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ သွားကြရသည်။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု စတင်ခဲ့သည့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို မျှော်လင့် တောင်းခံခဲ့ကြပေမဲ့ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ဂျပန်သို့ ဆက်လက် ချဉ်းကပ်ခဲ့ရပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:49 AM No comments:
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု – ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေအထား ၄ ခု
သဘောထားကွဲပြားမှု အားလုံးနီးပါးလောက်ကို ခွင့်မပြုဘဲ အထီးကျန်ဆန်ဆန် နေတတ်ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စိုးမှု နိုင်ငံအဖြစ်ကနေ နိုင်ငံတကာရဲ့ အားပေးချီးမြှောက်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံက ခံယူရရှိထားပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ တရားဝင်မှုကို အပေါ်ယံဟန်ပြ ရရှိထားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ကို မြန်မာက တနှစ်နီးပါး အချိန်အတွင်းမှာ ကူးပြောင်း ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ၀ါရင့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် စစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထောက်ခံမှု ပေးခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတကာ မိသားစုကလည်း အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းထားကြပါပြီ။ ဒီအတွက်ကြောင့်ပါပဲ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းမြင်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက် ထားမှုတွေကို ပြန်လည် မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ နှစ်ဖက်လုံးက အချိန်ယူညှိနိုင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သာ အောင်မြင်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နိုင်သလို ပိုလိုလား နှစ်သက်စရာလည်း ကောင်းတယ်ဆိုတာ အားလုံးက တဖြည်းဖြည်း သဘောတူ လက်ခံလာပေမယ့် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတော့ မသေချာသေးပါ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:11 PM No comments:
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီနှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အာဏာရပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည့် သူရဦးရွှေမန်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လေ့လာရေး ခရီးစဉ်အတွင်း အေပီသတင်းဌာနအား ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူရဦးရွှေမန်းက ၎င်း၏ ပါတီအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းလည်း ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:46 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:41 PM 1 comment:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:08 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:26 AM No comments:
Pu Lal Maung Cung ( MLA)
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် လူမျိုး၊ဘာသာ ဂိုဏ်းဂဏ မခွဲခြားပါ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်၊ လူထုသဘောထားဆန္ဒကို လေးစားသမှုပြုသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် ၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေကို ပေါ်တင်ဖြုတ်ချရဲသည်။
- ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့သည် ပါတီ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဒေသ ခွဲခြားမှုရှိသည်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ လူထု ဆန္ဒ ကို အလေးမထားပဲ သူတို့ သဘောထားဆန္ဒကို ပိုပြီးအလေးပေးသည်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသော အစိုးရ၀န်ထမ်းများ ပေါ်တင်အရေးယူမှုမရှိ၊
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:20 PM No comments:
ကလေးလုပ်သားများကို အနှိပ်စက်ဆုံး နိုင်ငံ စာရင်းတွင် မြန်မာဦးဆောင်
ရန်ကုန်- ကမ္ဘောတစ်လွှားနိုင်ငံများ တွင် ကလေးအလုပ်သမားများကို အနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှုအဆိုးရွား ဆုံးနိုင်ငံစာရင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှ ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာအလုပ်သ မားအဖွဲ့အစည်း (ILO)၏ သုတေသနစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကလေးလုပ်သားများကို အနိုင်အထက်ပြုမှုအဆိုးရွားဆုံး နိုင်ငံများဖြစ်သော မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ ကွန်ဂို၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘရွန် ဒီ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတို့၏ ထိပ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံက ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 5:55 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:28 PM No comments:
ရွာသားများအား ရိုက်နှက် ခဲ့သူ အစိုးရတပ်ရင်းမှူး ခြိမ်းခြောက်မှုဆက်လုပ်နေဆဲ
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲရှိ ၀ါးတောရွာသားလေးဦးကို စေခိုင်းမရ၍ ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အစိုးရတပ် စစ်ကွပ် ကဲရေးဌာနချုပ်(စကခ-၁၉) လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ်ရင်း (ခမရ-၅၈၈) တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးအောင်ဝင်းထူးသည် ဇွန်လ ၈ရက် နေ့က ၀ါးတောတောင်သူတစ်ဦးအား ထပ်မံ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက “ဇွန်လ ၇ရက်နေ့က ဗိုလ်မှူးအောင်ဝင်းထူးကို မေတ္တာမြို့က ဗျူဟာက ခေါ်တယ်။ ခေါ်ပြီး အဲဒီညနေမှာပဲ ပြန်လာတယ်။ ပြန်လာပြီး နောက်နေ့မနက်မှာပဲ တောင်ယာခင်းက ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းနေတဲ့ ၀ါးတောရွာက စော ချစ်မောင် ၂၅နှစ်ကို ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ဒီဆေးကို ဖြန်းတာလဲမေးပြီး မင်းရဲ့ ၀ါးတောရွာ ဥက္ကဌကို သွားခေါ်စမ်းလို့ခိုင်းတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:40 PM No comments:
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတအဖြစ် ရည်မှန်းချက် ရှိထားကြောင်း လူသိ ရှင်ကြား ပြောဆိုထားပြီး ဖြစ်သည်။ အလားတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကလည်း သူ့အနေနှင့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နေရာကိုဆက်ခံရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း Irrawaddy မဂ္ဂဇင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ဆိုသည်။
အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Baroness Warsi ရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို မြန်မာပြည်သားတို့ လက်မခံ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီများအား အင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Baroness Warsi က ရိုဟင်ဂျာဟု သုံးနှုန်းပြီး လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့သင့်သည်ဟု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Baroness Warsi သည် ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်အတွင်း၌ Baroness Warsi နှင့် ပြည်ပအခြေစိုက်Burma Campgin UK နှင့် Debate (စကားစစ်ထိုးပြီး) ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 7:16 PM No comments:
ဦးပိုင်မှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနေတဲ့ မြဝတီဘဏ် လီမီတက်
ဒီနေ့မှာတော့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေး အခြေခံပေါ် မူတည်ပြီး Sanction လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ လုပ်သင့်ပြီး အကျိုး ရှိ မရှိ စဉ်းစားရမဲ့ အပိုင်းတွေ၊ စစ်တပ် အရာရှိတွေအပြင် အရပ်ဘက် အရာရှိတွေ အနေနဲ့လည်း ဘယ်လို လေ့လာသင့်တယ် ဆိုတာတွေကို အင်ဒိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ ဆွေးနွေး သုံးသပ်ချက်များအား ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:52 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်လာရင် ကုလားတွေကို အခွင့်အရေး ပေးတော့မယ်... ဆိုတဲ့ ဆိုက်ဝါး ကို အထင်းသား တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီလို ဆိုက်ဝါးဟာ မသိနားမလည် တဲ့ ဗမာ လူထုရဲ့ အသဲနှလုံးတွေကို လှုပ်ခါ စေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံမှာ ဒီမိုကရေစီ အိုင်ကွန် အနေနဲ့ နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွန်းအရ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စကားကိုတော့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ဥပဒေ ထဲက နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ပါပဲ။ ကုလားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မူဆလင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
ကလေးဖျက်ချခွင့် ဥပဒေ မရှိပဲ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကလေးနှစ်ယောက် အစီအစဉ် ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ?
UN Declares Birth ControlaHuman Rights ဆိုတာ ကို အဓိပ္ပါယ် တမျိုးပေါက်အောင် ဘာသာပြန်ထားပြီး ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာကလေး နှစ်ယောက်အစီအစဉ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလဲ ငတုံး ဖြစ်အောင် ပြောနေတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
ယူအန်ရဲ့ ကလေးထိန်းချုပ်မှု ဆိုတာ အာဏာ နဲ့ အဓမ္မလုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ လူထုပညာပေးခြင်း၊ ကလေးမရအောင်လိင် ဘယ်လို ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ မိသားစု နဲ့ ကျောင်းတွေ မှာ လိင်ပညာပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီး တွေ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့် စတာ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဥပဒေ ပြဠာန်းရမယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပညာရေးမြင့်မားလာတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာက ကလေးယူခိုင်းရင်တောင် မယူတော့လို့ အစိုးရက ကလေးထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးပြီး ကလေးမွေးဖို့ ဆော်သြနေရပါတယ်။
ဇူလိုင် ၇ အရေးတော်ပုံကို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံးစမ်းပေးပါ” ဦးလှရွှေ ပြော
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၏ တော်လှန်ရေးကောင်စီ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်စဉ် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ဆန္ဒပြနေသည့် ကျောင်းသားများကို အစိုးရတပ်မှ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်
ဖြစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့၍ ဖော်ထုတ်ပေးရန် ယင်းကာလက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေ က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၁၉၇၄ အလုပ်သမားအရေးအခင်းနှင့် ၁၉၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ခုနှစ် ကျောင်းသား အရေးအခင်းများ၏ အောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:17 PM No comments:
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲ အတွင်းရှိ ၀ါးတော(၀ါ့ကလား) ရွာသားလေးဦးကို ဇွန်လ ၄နှင့် ၅ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်က ခိုင်းစေမရ၍ ပါးရိုက်ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါဒေသမှ လာသည့်သတင်းအရ သိရသည်။
အင်အားကောင်း နှစ်ပါတီစနစ်ကို မဖြစ်ညစ်ကျယ် ပီအာနဲ့ အစားထိုးမလား
သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုသည်များမှာ အပေါ်ယံမဲဆွယ် စကားများသာ ဖြစ်နေပါသည်။ အပေါ်ကတော့ ပြောင်းလဲပါရဲ့ အောက်ခြေက လိုက်မပြောင်း ဘူးဟူသော စကားသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်စားခြင်း၊ ရာစုနှစ်တစ်ခုစာ အကြောက်တရားကြီးစိုးခဲ့ခြင်း၏ ပုံစံကျခြင်း၊ မလှန်ရဲခြင်းများကို ပြသည်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသမားတို့ကို အထီးကျန်ထားနိုင်လျှင် ပြီးရောဟူ၍ အရင်းရှင်မွေး၊ ဝန်ထမ်းတွေ မက်လုံးပေး
နှင့် နှစ်၂ဝ ကျော်ကြာ ထပ်မံလမ်းလွဲခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျသည့် နိုင်ငံငယ်တစ်ခုတွင် အားကောင်းသောအစိုးရ၊ ပါးနပ်သောအစိုးရ လိုပါသည်။ ဟိုကြောက်ရ၊ ဒီမျက်နှာချိုသွေးရ၊ အိမ်ကျယ်အစိုးရမျိုးနှင့်လည်း မဖြစ်ပါ။
မြန်မာကို စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးရေး ဗြိတိသျှ စစ်ဦးစီးချုပ် ဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မြို့အပြင်ဖက် ထောက်ကြံ့ရှိ ဓနသဟာယ စစ်သင်္ချိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sir David Richards သွားရောက် အလေးပြုခဲ့စဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
အင်္ဂါ နေ့က ပြီးဆုံးခဲ့သော ဗြိတိန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ဗြိတိန်တပ်မတော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုခရီးစဉ်သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအဖြစ် အနောက်နိုင်ငံတခု၏ စစ်တပ်အကြီးအကဲ ရောက်ရှိလာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:31 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:17 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေ နောက်ပြန် လှည့်မည်မဟုတ်ဟု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ပြော
တပ်မတော်က ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်ပေး ခဲ့တာဖြစ်လို့ လက်ရှိ အစိုးရ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ဆက်လျှောက်နိုင်အောင် ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 4:10 PM No comments:
ဆောင်းပါးရှင် - ဗိုလ်သိုးထိန်း
ဒီတခါတော့ ဘောဂဗေဒဘက် ခြေဦး လှည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်မှုရဲ့ အခြေခံအချက်က စီးပွားရေးဆိုတာကြီး ဖြစ်နေလေတော့ ဒီဘောဂဗေဒ ဆိုတာကြီးကလည်း မပါရင် မပြီးပြန်ဘူးဗျို့။ ဘောဂဗေဒအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုလို့ မင်းက ဘယ်လောက် နားလည်လို့လဲလို့ မေးလာရင် သိပ်တော့ နားမလည်ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဝိသမ လောဘဇော အမြတ်ကြီးစား စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူများကို ဦးတည်ချင်လို့ ဆက်စပ်ပြောရတာပါ။
သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ လည်းဖြစ်၊ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ်ကို မလေးရှား မှာ မြန်မာ တချို့ ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စအပေါ် သတင်းမှားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ က ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ အသိပေး ရေးသားတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ် လူတွေ အတော်ဝေဖန်နေကြပါ တယ်။
မလေးရှားရှိ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို သူ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး သတင်းမှားတွေဖြစ်လို့ မယုံကြည် ဖို့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီအတွက် ဦးရဲထွဋ်ဟာ သတင်း ထိန်ချန်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ
ပြည်မြို့၊ မေ ၃၁
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်း ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် အချုပ်သား တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစုက တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားကာ စခန်းမှူးအား တရားစွဲဆိုခဲ့သော အမှုကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ပလပ်ခဲ့ကြောင်း ပန်းတောင်း မြို့နယ် တရားရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မေလ ၂၃ ရက်နေ့က ပန်းတောင်းမြို့ ရဲစခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားစဉ် လေးရက် မြောက်နေ့၌ သေဆုံးခဲ့သူ ဦးသန်းထွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြင့်ဌေးက ပန်းတောင်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ဦးတိုက် လျှောက်ထားကာ စခန်းမှူးဦးဆန်းလင်းကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ကို ပလပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရားလို ဒေါ်မြင့်ဌေးက ပြောကြားသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:39 PM No comments:
မော်လမြိုင် အခြေစိုက် ရဲတပ်ရင်း(၁၅)မှာ ရဲတပ်ရင်းမှူး ဒု-ရဲမှူးကြီးမြင့်နိုင်နဲ့ ဇနီးတို့ဟာ ရဲဘော်နဲ့ အရာရှိတွေအပေါ် မညှာမတာ ပြုလုပ်နေတာတွေ ရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
၂၀၁၃သင်္ကြန် ရေကစား မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေး တာဝန်ကျ ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်ဦးနှင့်ဆွေအောင်
တို့မှ ရဲတပ်ရင်းမှူး ဒု-ရဲမှူးကြီးမြင့်နိုင် အိမ်က ရဲဘော် လက်ဖြောင့် (အမည်ပြောင်း) မူးလာတာကို တိန်းသိမ်းဆိုဆုံးမ ခဲ့ပါတယ်။ ရဲဘော်ကလည်း အရာရှိတွေကို ပြန်ပြောပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:38 PM No comments:
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို အာမခံပေးဖို့ ကမ္ဘာတလွှား သတင်းစာနဲ့ သတင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများအသင်း (WAN-IFRA) က မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ မနေ့က စတင်ကျင်းပတဲ့ အသင်းရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံမှာ အခုလို တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:15 AM No comments:
(Crime Against Next Generation)
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အလွန်ဆိုးဝါး ကြီးလေးတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တာကို အားလုံးအသိပဲ။ ဇူလိုင် ၇ မှာ ကျောင်းသား ရာကျော်ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာ၊ ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းကြီးမှာ ဆေးရုံထဲအထိ ဝင်ပစ်တာ၊ ဆယ်ကျော်သက် အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေပါမချန် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာ၊ မြောက်ဥက္ကလာမှာ အလောင်းတွေလမ်းနဲ့ ပြည့်သွားအောင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာ၊ ၂၀၀၇ မှာ သံဃာတွေကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်တာ၊ ကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာ၊ စစ်ကြောရေးမှာ အသက်သေတဲ့ အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေဟာ အလွန်ဆိုးဝါး ကြီးလေးတဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြီးတွေပဲ။ စီးပွားရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ၊ နိုင်ငံရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ၊ တရားစီရင်ရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ အားလုံးဟာ ကြီးလေးတဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှု တွေချည်းပဲ။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:32 AM No comments:
အာဆီယံကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝါရီကျွန်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Singapore နိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Shangri-La Dialogue 2013 ဆွေးနွေးပွဲမှာ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Hagel က အာရှ Pacific ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် အမေရိကန်ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီကနေ့ ပြောကြားသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ခုလို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းမှာ အမေရိကန်ရဲ့ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကို အဓိကပြောကြားသွားတဲ့အထဲမှာ မြန်မာနဲ့ စစ်ရေးဆက်ဆံမှုကို အသေအချာတွက်ချက်ပြီး စတင်နေပြီဆိုတာကိုလဲထည့်ပြီးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ခုလို Shangri-La Dialogue ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသွားတဲ့ အကြောင်းတွေကို မစုမြတ်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:29 AM No comments:
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေး (Shinzo Abe) ရဲ့  မြန်မာပြည်ခရီးမှာ ဗမာအစိုးရကို ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ထုတ်ချေးဖို့နဲ့ ဆပ်ရမယ့်အကြွေး ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀၀ ကို လျှော်ပြစ်ဖို့ ကတိပေးပါတယ်။ ဂျပန်နဲ့လုပ်မယ့် စီမံကိန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ဂျပန်ကုမ္မဏီ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မြန်မာကုမ္မဏီတွေ နားလည်းမှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်။
ဂျပန်အကူအညီရလို့ တရုတ်ကိုကြီး မှီခိုနေရတဲ့ဘဝ နိဂုံးချုပ်ဖို့ အလားအလာရှိလာပြီလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဂျပန်ကုမ္မဏီတွေနဲ့ မြန်မာကုမ္မဏီတွေ အကျိုးအမြတ် ခံစားကြရမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်အမည်ခံ မဆလ စစ်အစိုးရကိုလည်း ဂျပန်က အများဆုံး ကူညီခဲ့ပေမယ့် စီးပွားရေး ခြွတ်ခြုံကျပြီး အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဘဝ ရောက်သွားလို့ ၁၉၈၈ မှာ ပြည်သူ့အုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဂျပန်ရဲ့  ထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် ဗမာစစ်အစိုးရ တရုတ်ကို အားကိုးလာရပါတယ်။ ဗမာအစိုးရရဲ့  အပြုအမှုကိုလိုက်ပြီး ဂျပန်အစိုးရက ငွေထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမအကြိမ် ခြောက်နှစ် ထိန်းသိမ်းပြီး ၁၉၉၅ မှာ လွှတ်ပေးလိုက်တော့ ဂျပန်က ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း ကူညီပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:27 AM No comments: